मेरा छोराछोरी मभन्दा असल छन् : शाहरुख खान :: एजेन्सी :: Setopati
कार्तिक १, मुम्बई
छोरा आर्यन खान लागुऔषधको मुद्दामा पक्राउ परेपछि अभिनेता शाहरुख खान केही समययता मिडियामा छाइरहेका छन्। आर्यन जेलबाट बाहिर आउन अदालत धाइरहेका बेला अहिले इन्टरनेटमा शाहरुखले सात वर्षअघि आफ्ना छोराछोरीबारे भनेका कुरा अहिले भाइरल भएको छ।
सन् २०१४ मा शाहरुखले एउटा अन्तर्वातामा आफ्ना दुई छोरा आर्यन र अम्ब्राहम, अनि छोरी सुहानाको गुनगान गरेका थिए। उनले आफ्ना छोराछोरी आफूभन्दा असल रहेकाे भनेका थिए। शाहरुखले आफूले छोराछोरीलाई हुर्काउने तरिकाबारे पनि बोलेका थिए।
‘मेरा छोराछोरीले आफ्नो इच्छाअनुसार जुनसुकै काम गर्न पाउँछन्। म केवल उनीहरुको स्वस्थ र सुखी जीवन चाहन्छु,’ शाहरुखले भनेका थिए, ‘म उनीहरुलाई कहिल्यै डाक्टर, इन्जिनियर वा अभिनेता बन्न दबाव दिन्नँ। उनीहरुलाई जे मन लाग्छ त्यही बन्न सक्छन्।’
शाहरुखका अनुसार उनका कुनै पनि छोराछोरीमा उनको बानी सरेको छैन र उनी यसका लागि निकै खुसी छन्। उनी भनेका थिए, ‘मेरा बच्चाहरु र मबीच समानता भनेको केवल हाम्रो गालाको डिम्पल हो। उनीहरु निकै असल र ज्ञानी छन्।’
शाहरुख आफ्ना छोराछोरीको माया र विश्वासबारे सधैं खुल्ला रुपमा मिडियामा बोल्दै आएका छन्। उनका प्रशंसकले उनलाई के उनी छोराछोरीका अगाडि कडा स्वभाव देखाउँछन् भनेर प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘बच्चाहरु माया गर्न र गल्ती गर्न बनेका हुन्। उनीहरुलाई हामीले केही कुरामा कडाइ गर्नु हुँदैन, र अहिले मेरा छोराछोरीहरु मेरा साथी हुन्।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १, २०७८, ०१:५८:०८
प्रदेश १ मा कांग्रेस संस्थापन पक्षले जित्यो धेरै जिल्ला सभापति
सात वर्षअघि खुम्बुमा जे देखेको थिएँ, त्यो त हराइसकेछ (भिडिओ)
यी हुन् राप्रपाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीका आकांक्षी
लमजुङ कांग्रेसमा झन्डै तीस वर्ष बोलचाल नभएका दुई नेता मिलेपछि
यसरी गर्छन् ट्विंकल खन्ना र अक्षय कुमार घरको खर्च बाँडफाँट
विक्की र कट्रिनाको बिहेमा क-कसलाई बोलाइएको छ ?
अभिनेत्री सान्या मल्होत्राले साटिन् 'ब्रेकअप' को पीडा
शाहिद कपुर अभिनित ‘जर्सी’ फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक
आफ्नो छोरालाई फसाउने प्रहरीलाई के गर्ने सोचिरहेका छन् शाहरूख खान?
यस्तो छ कपिल शर्माको २५ करोड भारू पर्ने फार्महाउस (तस्बिरहरू)
संरचना फेरियो तर मन फेरिएन! दीपा धिताल